Ny fifandraisana eo amin'ny printsy William sy Harry dia voalaza fa tena henjana - teles relay
Ny fifandraisana eo amin'ny printsy William sy Harry dia voalaza fa tena henjana
Hatramin'ny fanapahan-kevitry ny printsy Harry hanalavitra ny asany ambony mpanjaka, ny fifandraisana amin'ny rahalahiny, Prince William, dia voalaza fa henjana tokoa. Fiatoana mety hisy vokadratsiny toy ny fahafatesan'ny reniny, Lady Diana.
Ny printsy Harry sy William dia mety ny mihavana. Nandritra ny herinandro maro, teo anelanelan'izy mirahalahy, ny fifandraisana tsy ho tsara. Ny antony: ny fanapahan-kevitry ny zandrin'izy roa lahy hanalavitra ny asany amin'ny maha-mpanjaka azy ary hifindra any Los Angeles miaraka amin'ny vadiny, Meghan Markle sy ny zanany lahy, Archie. ihany, fifanolanana eo amin'ny zafikelin'i Queen Elizabeth II mety ho trauma lehibe ho azy roa. Eny tokoa, ilay mpanao gazety teo aloha sady manam-pahaizana momba ny mpanjaka Robert Lacey, dia nanome toky fa raha tsy vitany ny mampitsahatra ny adiny dia ho " ratra »Mitovy amin'ny fahafatesan'ny renin'izy ireo, Princess Diana, araka ny tatitra Mirror.
Ao anaty boky vaovao, manome antoka an'io ilay mpanao gazety teo aloha ny fisarahana teo amin'ireo printsy Harry sy William lehibe kokoa noho ny soso-kevitry ny mpanjaka britanika. Ny elanelana misy eo amin'izy ireo dia " ratsy noho ny nieritreretanao azy", hoy izy nanambara. Raha ny filazany, fa tsy manandrana mampihavana azy mirahalahy ireo, aleon'ilay mpanjaka nanidy ny masony, manantena fa hanova zavatra amin'ny fomba tsara ny fotoana. Ihany, ny lolom-po dia ho lalina loatra ary ny lolom-po maro.
Betsaka ny lolom-po eo amin'ny printsy Harry sy William
« Raha tsy sitrana amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa io fifanolanana misy eo amin'ny mpirahalahy io, dia hitohy amin'ny krizy amin'ny famonoana olona sy ny fahafatesan'i Diana ho iray amin'ireo traumas izay nanova ny fanjakan'ny mpanjaka.", Nanoratra ny manam-pahaizana indray tao amin'ny bokin'ny lohateny, Adin'ny mpirahalahy. " Fotoana izao hanovana zavatra amin'ny làlana tsara, saingy amin'izao fotoana izao dia tsy mandeha amin'izany lalana izany ny lapan. Robert Lacey dia manantena fa ny bokiny dia hanampy ny mpanjaka hanana fanapahan-kevitra mety hanampiana azy mirahalahy hirotsaka indray.
JADEN SMITH Mankalaza ny andro nahaterahany 19 - Video